About Us - Keyu Zhanye Izinsiza kusebenza & Technology Co., Ltd.
Sisiza Emhlabeni ekhulayo kusukela ngo-1995
Call Ukusekela Ifoni: 0531-88825528
usekelo lwe-imeyili Email: alcohol@keyualcohol.com
usekelo lwe-imeyili Email: ethanol@keyualcohol.com
usekelo lwe-imeyili Email: sale@keyualcohol.com
Utshwala Production nge Non-ukupheka &-non-saccharification ubuchwepheshe
Qedela plant Ethanol eliphelele
Qedela isitshalo zokukhiqiza utshwala
Qedela plant DDGS
Qedela isitshalo CO2 ketshezi
Qedela isitshalo zokukhiqiza isitashi ushukela
Qedela plant imfucuza amanzi
ziphuzo zazihluzwa umbhoshongo
Jinan Keyu Zhanye Technology nethulusi Co., Ltd.
Jinan Keyu Zhanye Izinsiza kusebenza & Technology Co., Ltd kuyinto okusezingeni eliphezulu & entsha ubuchwepheshe ibhizinisi. It is eyasungulwa osolwazi abeluleki, ochwepheshe Shandong Imboni Khanyisa Inyuvesi Shandong Ukuvutshelwa Design Institute futhi iqembu onjiniyela senior. Benziwa emasimini utshwala kanye CO2. Ishabhu ithatha 50,000 M2. Le nkampani elise iziphethu enhle idolobha Jinan, okuyinto isikhungo ezombusazwe, ezomnotho kanye namasiko esifundazweni Shandong.
Kusukela ngo-1995, Keyu Inkampani usethathe ukuklanywa, ukwakhiwa kanye wayenikeza abantu izinkonzo technical Distilleries eziningi, i-ethanol manufactories futhi mafektri amakhemikhali e China.
Keyu inkampani uhlaziyo design, imishini ukwakhiwa inkonzo lobuchwepheshe ukuze 100,000T / Y izinga esihle ezidliwayo utshwala iphrojekthi, 15,000T / Y acetic acid iphrojekthi, 10,000T / Y CO2 project kanye nokwelashwa kwamanzi utshwala imfucuza iphrojekthi ePakistan. Siye yimpumelelo igcwaliswe 60,000 T / Y fuel Ethanol yephrojekthi 30,000 T / Y amaprotheni feed (DDG) project eRussia. Siphinde futhi sihlele futhi ukwakha utshwala abahle namaphrojekthi ahlobene ikhasimende American. I eliphezulu futhi inkonzo babeyigugu walincoma amaklayenti yangaphandle.
Keyu Inkampani njalo esekelwe "ukukhonza amakhasimende ngobuqotho" ukwenza lemisebenzi elandelayo kokubili ezifuywayo kwezilwandle.
A. Ukwenza jikelele ukuklanywa, ukwakhiwa noma lobuchwepheshe umsebenzi iNguquko ngoba 3,000-500,000T / Y kahle izinga alcohols (GB10343-2008).
B. Ukwenza emsebenzini wokwakha 1,500-300,000T / Y Ethanol ngokuphelele (Yamamolekhula ngesihlungo embhedeni indlela).
C. Design futhi ahlinzeke nemishini Bacela & esikhiqiza kahle izinga ukudla grade CO2 ngoba Distilleries / Ethanol isitshalo. Indinganiso GB10621-2006 senziwa.
D. Supply ubuchwepheshe ephelele (nobuchwepheshe obuphambili bezokuphepha emhlabeni) futhi inkonzo ukwakhiwa ukukhiqiza okuphakelayo granuleprotein (DDGS) simila Distilleries / Ethanol ezisebenzisa corn nokolweni njengoba impahla.
E. Nikeza "zero vinasse ukudedela" msebenzi, okuthiwa kuyinto nobuchwepheshe obuphambili bezokuphepha e China.
F. Nikeza ubuchwepheshe kanye nemishini Distilleries / Ethanol isitshalo ukuze aphathe vinasses ketshezi kahle, nika amandla amanzi akhanywa ukuhlangabezana "Uxhumano Wastewater Ukukhishwa Standard" (GB18918-2002).
G. Design kanye nemishini ukukhiqiza i amanzi ukonga amaphrojekthi, bese wehlise ukusetshenziswa kwamanzi ukuze 20m3 ngokukhiqiza ithani elilodwa utshwala.
H. Ukukhiqizwa imishini esikhethekile umkhakha ukukhanya futhi amakhemikhali umkhakha
Inkampani yethu unikeza hhayi kuphela ubuchwepheshe kanye izinga okusezingeni imishini ephezulu emisha kodwa futhi uhlinzeke kakhulu emva-sales service. ukuqeqeshwa zobuchwepheshe wonke-ukuphila inkonzo lobuchwepheshe zizonikezwa ngemuva kokuqeda project kanye.
Sithunywe ukwakha ukwaneliseka kwamakhasimende ubuchwepheshe bethu phezulu-simo, imishini ephezulu simo, phezulu-simo credit ukuma futhi isevisi phezulu keme.
Jinan Keyu Zhanye Izinsiza kusebenza & Technology Co., Ltd ubuchwepheshe okusezingeni eliphezulu & entsha enterprise.It is eyasungulwa osolwazi abeluleki, ochwepheshe Shandong Imboni Khanyisa Inyuvesi Shandong Ukuvutshelwa Design Institute futhi iqembu onjiniyela senior.